Xafiiska Puntland – Page 48
Articles by Xafiiska Puntland
Deg-deg:- Kenya oo bilaawday in xuduudeeda ay ku xirto dad somali ah.
February 20, 2019 Xafiiska Puntland 0
Wararka inaga soo gaaraya Xuduuda ay wadaagan dalalka somali iyo kenya ayaa waxay sheegayaan in la xiray shaqsi shaki laga qaaday kaasi oo macluumaadkiisa saxaafadda loosoo bandhigay. Shaqsiga la xidhay oo lagu magacaabo Cabdow Xasan
XOG:- Warar Cusub oo aanu ka helnay Kulanka Madaxwayne Farmaajo iyo Muuse Biixi + Ajanadaha laga hadlayo.
Madaxwaynaha Jamhuuriyaddda Federaalka ah ee Somalia Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Hogaamiyaha Maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sida qorshuhu yahay saacadaha soo socda waxay ku kulmi doonaan magaalada Addis Ababa ee Caasimadda Ethopia. Kulanka
Jubbaland oo noqotay meesha kaliya ee wali la keeno qaadka ka yimaada Dalka Kenya ”Xog badan ogoow”
Waxaa Maalintii labaad inta badan gobollada Somalia mamnuuc ka ah qaadka ka yimaada Dalka Kenya kadib markii ganacsatada qaadka ee Muqdisho ay ku dhawaaqeen in ganacsigooda ay uwareejiyeen dalka Ethopia. Xiriiro iyo xuuraansi Marqaannews ay
Degdeg:- Sargaal katirsan Xeer ilaalinta qaran oo Dil iyo dhac gowr dhaw loogu gaystay Muqdisho.
Wararka saakay inaga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in dableey kuhubaysan Bastoolad ay toogasho kudileen sargaal katirsan Xeer ilaalinta Qaranka somaliyeed. Sargaalka la dilay oo magaciisa Marqaannews loogu sheegay Maxamed Mursal ayaa laga
Daawo Deg-deg:- Cali Khaliif Galaydh oo Hargaysa kusoo laabtay iyo Bahdil uu kala kulmay soo dhaweyntiisa.
February 19, 2019 Xafiiska Puntland 3
Magaalada Hargaysa waxaa maanta dib ugu soo laabtay Siyaasiga Cali Khaliif Galaydh kaasi oo safar uga soo kictimay dalka Mareekanka halkaasi oo uu mudooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa. Cali Khaliif oo aan sumcad wayn ku
Daawo:- Lacagtii kenya kubixi jiray oo loo wareejiyay Ethopia iyo faahfaahin laga bixiyay farqiga udhaxeeya.
February 19, 2019 Xafiiska Puntland 0
Ganacsatada qaadka Somaliyeed ayaa waxay si rasmi ah maanta ugu dhawaaqeen in gebi ahaanba ay joojiyeen qaadkii uga imaan jiray dalka kenya iyagoona usabeebayay inay garab taagan yihiin dowladooda. Qaadkii ka imaan jiray kenya ayay
Dhagayso:- Shacabka Boosaaso oo hal arin ku amaanay Madaxwayne Deni muddadii uu xafiiska joogay.
February 19, 2019 Xafiiska Puntland 1
Iyadoo Maalmihii lasoo dhaafay ciidamada kala duwan ee amaanka Puntland howlgalo lagu sugayo amniga ka wadeen gudaha magaalada Boosaaso ayaa waxaa soo baxaya isbedel dhinaca amaanka ah oo ay dareemayaan dadweynaha kunool magaalo xeebeedka Boosaaso.
XOG:- Yaa bixiyay amarkii lagu xiray Xafiiska Xisbiga Wadajir ee Puntland “MD Deni muxuu ka ogyahay arintaasi?”.
Maamulka Puntland ayaa saakay albaabada isugu laabay Xafiiskii xisbiga Wadajir ee uu gudoomiyaha ka yahay Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kulahaa magaalada Garoowe ee Caasimadda Puntland. Warar hoose oo ay heleyso Shabakadda Marqaannews ayaa sheegaya in
Daawo Degdeg:- Somaliland oo markii horaysay ka hadashay khilaafka Kenya iyo Somalia “Fursad bay inoo tahay”.
February 19, 2019 Xafiiska Puntland 2
Dowladaha Somalia iyo Kenya waxaa dhawaan ka dhex curtay khilaaf ku saabsan xuduudaha Badda iyadoona kenya ay ku dhawaaqday in ay jartay xiriirkii ay la lahayd Somalia. Maamulka Somaliland ayaa markii ugu horreysay ka hadlay
Daawo:- Maxay ka dhigan tahay in Mustafe Cagjar iyo ciidankiisa oo hubaysan kasoo talaabaan Xuduuda Somaliland + Jawaabta jilicsan ee Sland.
Sida ay sheegayaan wararka kusoo dhawacay xafiiska wararka Marqaannews waxaa maalin kahor xuduuda somaliland ee Degmada Wajaale kasoo talaabay Madaxwaynaha DDS Mustafe Cumar Cagjar oo ay wehliyaan Ciidamo badan oo ku hubaysan hhub aad uculus.
Warbixin:- Kenya yay la gashay heshiiska calaamadaynta xuduuda bada ee Somalia?
Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda ee dalka Kenya, Moses Wetangula ayaa sheegay inay Dowladaha Somalia iyo Kenya ay horey u kala saxiixdeen Heshiis kaasi oo ku saleysan dhanka xuduuda badda. Heshiiskaasi ayuu sheegay in labada dowladood ay
Somaliland “Diyaar baynu unahay wada hadal inaan la galno Somalia Laakin hala fuliyo shuruuda aan wadano”.
Maamulka Somaliland ayaa shuruud ku xiray dib u billaabidda wadahadalka Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo Maamulka Somaliland. Wasiirka arrimaha Dibadda ee Somaliland Yaasiin Maxamuud Faratoon ayaa sheegay in wadahadalka ay Somaliland diyaar u tahay
Deg-Deg:- Xildhibaan Somaliyeed oo su’aal adag ka keenay sabata Ciidanka Kenya usii joogi karaan Somalia.
Dowladda Kenya ayaa dhawaan cadaw ku tilmaamay dhamaan dadka somaliyeed iyadoona sheegtay inaysan xisaabsan doono muwaadiniinta dhalashadaeeda haysta ee xilalka ka haya somalia. Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah Golaha shacabka Soomaaliya ayaa
Qaadleeyda Somaliyeed oo la saftay DFS “Qaadkii kenya oo maanta la diiday iyo Itoobiya oo fursad heleysa”.
Qaar ka mid ah ganacsatada khaadka keena Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inay joojiyeen gabi ahaanba jaadkii ay ka keeni jireen dalka Kenya, kadib markii shalay ganacsatada khaadka Kenya ay sheegeen inay joojin doonaan khaadka ay keenaan
Sir Culus:- Maxay Puntland, Somaliland, Jubbaland, iyo Galmudug Uga aamuseen Khilaafka Kenya “Balanqaadyo badan + Cadaymo”.
Tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu soo shaac baxay khilaafka cusub ee ku salaysan lahaanshaha Dhul badeed udhaxeeya Dowladaha Somalia iyo Kenya waxaa jiray hadalo ka imaanayay Bulshada somaliyeed qaybahooda kala duwan oo ay